Qingdao Renergy Equipment Co., Ltd., iri Qingdao, China, iri Hi-Tech zvebhizimisi aidaro tsvakurudzo, gadzira, rokutengesa uye hwokugadzira Consulting zviduku uye svikiro itsva simba magetsi rudzi maitiro uye simba kuchengetedza hurongwa. With simba R & D kugona, yakaoma unhu kudzora hurongwa, Renergy anokwanisa kupa nzwisisika itsva simba Michina rutsigiro basa vatengi.
Main zvigadzirwa: diki uye svikiro mhepo turbine hurongwa pasi 100kw; dzinotenderera zuva iri afoot uye kubvisa afoot gadziriro, denga renzou mari uye kuvakwa; mhepo chiedza zuva mumugwagwa, chiedza zuva bindu, akatungamirira kukura chiedza, akatungamirira yakakwirira Bay chiedza, akatungamirira tanera chiedza, akatungamirira chiedza mumugwagwa, indasitiri chiedza simba rokuponesa kutendeuka uye simba kuchengetedza yekuvandudzwa.
Renergy ane kiyi michina iri itsva simba indasitiri. Shanduka nenamo michina kuti diki uye svikiro kukura mhepo turbine angapedza yakachengeteka dambudziko iri mhepo turbine oparesheni. Shanduka namo, ABS kuchengeteka hurongwa, akangwara kudzora maitiro, uye kure zvichiongororwa pachikuva zvinopa yakachengeteka kudzivirira mhepo simba chiteshi kumhanya.
RENERGY fekitari ane zvemberi uye kuzvidzora dzakabudirira jenareta bvunzo papuratifomu, mhepo rotor nepakati hurongwa, shanduka namo bvunzo papuratifomu, kurukutika simba muchizviedza yezvirwere uye dzimwe mhepo siyana turbine specialized vasabatwa midziyo; fekitari ane kugona kuti pakukurukura 100sets mhepo turbine pamwedzi.
Wind turbine hurongwa zvinosanganisira mhepo turbine, shongwe, pamusoro afoot controller uye inverter nekuti kuroora danho kana zvitatu danho afoot kubatana. Renergy mhepo turbine anokwanisa anoenderana ne ari afoot inverters kubva ABB, EL simba nezvimwe akakurumbira muchiso mu China uye kunze.
RENERGY mhepo turbines dzakakurumbira chaizvo muGermany, Denmark nedzimwe nyika dzokuEurope; chokupika rave mvumo nevamiririri edu uye vatengi. Wind turbine hurongwa akasangana chaizvo mhepo kumhanya pamusoro 45m / s muDenmark.
Wind turbine hurongwa zvakakodzera kumapurazi, mhuri, duku mabhizimisi zvivako, Telecom chiteshi.
Noushamwari vatengi uye shamwari dzose pamusoro nyika kushanyira uye kutaurirana basa. Ngatikurukurei pamwe kwedu tose tibatsirwe.